Inona no hitranga any Chili?
Hatramin'izao, afaka antsoina i Shily , tsy misy fanitarana, iray amin'ireo toerana mahaliana indrindra manerana izao tontolo izao ho an'ny fitsidihana fizahan-tany. Eto amin'ity firenena ity dia misy toerana misy tantara arivo taona, faritra tsy azo henoina ary zavamaniry voajanahary, toerana izay tsy maintsy tsidihana tsotra izao mba hamerenana indray ny sehatra ara-kolontsainy. Ao Shily dia tena mahatsapa ny habaka nataon'ilay mpamorona izay tsy nanenina ny loko maoderina ho an'ity firenena ity.
Chile - tahirin-tsarimihetsika isan-karazany. Mba handinihana tanteraka azy ireo dia mila mandany mihoatra ny iray volana. Noho izany alohan'ny fitsangatsanganana dia ilaina ny manapa-kevitra hoe iza no tokony hojerena ao Shily.
Ny mahafantatra fa tsy ilaina ny manao lisitry ny toerana, fa koa ny toerana misy azy ireo, satria ny faritanin'ny firenena dia lava be, ary ny faritra tsirairay ao aminy dia misy ny lafiny ara-boajanahary sy ara-tsakafo. Mba hamantarana ny toerana fitsaharana na fitsangantsanganana ao amin'ny firenena dia azonao atao ny manome lisitra lavitr'ireo zavatra hita ao Shily miaraka amin'ny tantara fohy momba ny tsirairay amin'ireny toerana ireny.
Sehatry ny natioran'i Chile
Tena mampiavaka ny natiora an'i Chile, eto ianao dia mahita ireo faritry ny tendrombohitra avo indrindra, ary mankafy ny fahitana ny ranomasina tsy manam-petra, ary miaina ao anaty rivotra madio any an'ala. Alohan'ny fitsangatsanganana iray dia ilaina ny mijery sarimihetsika momba ny natioran'i Chile sy handalina ny famaritana azy. Ny halavin'ny firenena avy any avaratra ka hatrany atsimo ho an'ny 4000 km mahery dia manampy amin'ny fanatsarana ny toetr'andro. Noho izany, any Silia dia afaka mankafy ny fialan-tsasatra eny amoron-dranomasina ianao ary avy eo dia afaka mandeha mankany amin'ny toeram-pialan-tsambo. Saingy tsy dia mahafinaritra loatra ny fitsidihana an-tsehatra, izay hanampy amin'ny famolavolana hevitra momba ny toetra voajanahary eto amin'ity firenena ity.
Ny atleta malaza indrindra ao Chili dia ahitana:
Valam-pirenena ao Lauka . Ity toerana ity, raha ny marina, no lohatenin'ny fankasitrahan'ny mpizaha tany malaza ao amin'ny repoblika. Ny Park Lauka dia miorina any amin'ny 4 km mahery ambonin'ny haabon'ny ranomasina ary eo amin'ny sisintany miaraka amin'i Bolivia. Io tahirin-tsarimihetsika io dia nahavita nanangona betsaka tao amin'ny faritaniny an-tsokosoko ireo solontenan'ny zana-pambolena sy biby. Ao amin'ny valan-javaboary dia misy toerana voajanahary: ny farihy Chungara sy Laguna de Kotakotani , ny volkano Gualiatiri sy Akotango , ny reniranon'i Lauka sy Utah . Ankoatra izany, ao amin'ny sisin'ny valan-tseranana ny tanànan'i Parinacota, izay malaza amin'ny fiangonana kolonialiny - trano iray mahavariana. Afaka mankany amin'ny zaridainan'i Lauka avy any Santiago ianao . Mba hanaovana izany, mila mampiasa ny serivisy fiarabe mpitatitra entana mankany amin'ny seranam-piaramanidin'i Arica ianao . Avy eto amin'ity tanàna ity dia tsy maintsy mandeha bus ianao. Raha manofa fiara any Arica ianao, dia mila manara-maso ny CH-11 ianao. Manomboka amin'ny 145 kilometatra io faritra io.
Ny volokano Maipo . Izy io dia ao amin'ny tendron'ireo tendro atsimo andrefan'ny tendrombohitra Andes ary mipetraka eo amin'ny sisin-tanin'i Chili sy Arzantina, 100 km miala ny tanànan'i Santiago. Avy amin'ny renivohitry ny repoblika, ny vulkan dia manasaraka ny halavitry ny zato kilometatra. Araka ny voalaza tetsy aloha, ny lazan'ny Repoblikan'i Chili dia azo raisina ho tsy misy farany, hijanona foana ny mpizahatany amin'ny zavatra tsy mahazatra sy vaovao. Na izany aza, ny volkano Maypole dia te-hitsidika mihoatra ny indray mandeha. Ny lazany Maipo dia hita noho ny endrika tsy mahazatra, conical ary tena mifanohitra. Rehefa mipetraka eny ambony lembalemba ianao, dia afaka mankafy ny fomba fijery tsara tarehy izay manokatra lohasaha Maipo miaraka amin'ireo onja maro. Ao amin'ny lohasaha no misy ny farihy tsara indrindra Laguna del Diamante, izay niorina noho ny fipoahan'ny volokano.
La Portada . Any Chile, misy toerana izay niasan'ny natiora nandritra ny taona maro. Ary ny iray amin'izy ireo dia La Portada - tsangambato voajanahary tsy manam-paharoa izay aro-bozaka lehibe misy haavo 43 metatra ary 70 metatra ny halavany. Ny arofa dia voahodidin'ny faritra rehetra eny an-dranomasina ary toeram-ponenana mahafinaritra ho an'ny karazam-borona tsy fahita firy. Afaka mitsidika an'ity toerana ity ny tanànan'i Antofagasta .
Ny Tany Atacama no lohasahan'i lunar . Ny fahagagana ao amin'ny lohasahan'i lunar dia tsy misy fiainana eto: eo amin'ny fomba ahitanareo vato fotsiny, farihy mitovitovy amin'ny rano salama sy ny filaminana tanteraka. Ao amin'ny tany Atacama, ho an'ny zava-drehetra, ny mpahay siansa dia tsy nahavita nanoratra tranga tokana tratry ny fisotroan-dronono, fa iray amin'ireo toerana mafana indrindra eto an-tany. Ary ny anarany faharoa dia ny lohasahan'i londola, ny Tany Atacama, dia nahazo ny toetoetran'ny tontolon'ny tany: mitovy amin'ny lemaka eo an-toerana ny tanimboly ao an-toerana. Ny fitsanganana mankany Atacama dia manomboka amin'ny fiaramanidina an'habakabaka mankany Calama . Ny ora fiasan'ny sidina dia ora roa. Avy ao an-tanànan'i Kalama, tokony hifindra any amin'ny toerana antsoina hoe San Pedro de Atacama .
Ny Valan-javaboarin'i Los Flamencos . Mizarazara ho sekta fito izy io, any amin'ny toerana samy hafa, izay samy manana ny toetrany manokana. Ny faritr'ilay valan-javaboary, manodidina ny 80.000 hektara ny faritra manontolo, dia manana haja lehibe amin'ny mpankafy mba hitandrina ny natiora sy ny tantara. Eto ny vondrona mpizahatany dia misokatra ny rava ao amin'ilay tanàna tranainy indrindra, ny taona izay, araka ny filazan'ny mpahay siansa, dia mihoatra ny telo arivo taona. Ny endrik'ity lohahevitra ity dia endrika tsy mahazatra - ny tanimbolin'ny tanimandin'ny trano rehetra dia tsy misy zoro. Ankoatr'izany, ao amin'ny faritanin'i Los Flamencos dia be dia be ny hatsaran-tarehin'ny farihy, ary koa ny toerana mahatalanjona eny an-tendrombohitra sy sary sokitra mahagaga, izay anjara asany ny natiora. Mba hahatongavana any amin'ny tahiry dia tsy maintsy mividy tapakila avy any Santiago mankany Antofagasta ianao, dia mandehana amin'ny lalana mankany Antofagasta mankany Calama, ary avy eo Calama mankany amin'ny tanànan'i San Pedro de Atacama. Tsy mahatratra 33 km mankany amin'ny toerana farany ary ny fitantanana ny Los Flamencos.
Ny nosy Chiloe . Ireo mpizaha tany voalohany tany Repoblikan'i Chili dia nanandrana nitsidika an'io nosy manokana io. Ity toerana ity dia manintona olona manana rivotra mahafinaritra, tora-pasika mahavariana ary tsangambato tsy tambo isaina ao amin'ny trano fandraisam-peo fahiny. Ohatra, ao Chiloe, afaka mitsidika ny fiangonana tsy manam-paharoa an'i Md Mary ianao, izay tafiditra ao amin'ny lisitry ny lovan-tsarin'ny UNESCO. Mba hahatongavana any Chiloe, afaka mandeha irery ianao amin'ny lakandrano Chacao. Ity fantsona ity dia manasaraka ny nosy avy amin'ny firenena hafa.
Toe-javatra ara-kolontsaina Chile
Ny Repoblika Chile koa dia manankarena amin'ny aterineto ara-kolontsaina, ny sariny tsy maintsy jerena mialohan'ny fitsangatsanganana, mba hanapahana hevitra amin'izay tokony hofidiana. Ny tena malaza amin'izy ireo dia ireto manaraka ireto:
Ny Mozean'i Gustav le Page . Ao amin'ny Repoblikan'i Chili dia misy ny fomba fijery mifandraika amin'ny taonarivo maro samihafa azo trandrahana amin'ny dingana rehetra, saingy tsy misy an'io tranombakoka io na dia eto amin'ity izao tontolo izao ity aza. Ny tranombakoka arika malaza ao Le Page, izay miorina ao amin'ny Tany Atakama, dia nanangona teo ambanin'ny tafon-tranony maherin'ny 385 000 tamin'ireo fampisehoana faran'izay tsotra. Tsara ny manamarika fa ny taonan'ny zavatra sasany dia mihoatra ny 10 000 taona. Ny fanangonana lehibe indrindra amin'ireo mummies ireo dia hita ao amin'ny Le Page (misy 400 eo ho eo ny tranombakoka). Ny sasany amin'ireo fampiratiana dia efa zokiny nandritra ny taon-jato maro tamin'ireo Ejiptiana nampihinana azy.
Nosin'ny Paska . Any amin'ny faritra atsimon'ny Oseana Pasifika dia misy toerana izay heverina ho mistery indrindra eto an-tany. Miditra izy, ary angamba koa ny loha, ny fanamarinana malaza ny fisian'ny Repoblikan'i Chili. Ireo mpizaha tany avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia tonga eto mba tsy hanangona ireo tora-pasika malaza sy hankafizo ny toerana, fa koa hanandramana manokana hamaha ireo zava-miafina maro izay tsy mamela ny taranaka iray mandritra ny alina matory. Any amin'ny Nosin'ny Paska no misy ireo tsangambato malaza indrindra amin'ny sivilizasiona tsy fantatra indrindra. Ny sarivongana avo be, izay miovaova ny halavany amin'ny 3 ka hatramin'ny 21 metatra, dia mahagaga fotsiny ny fisainana. Hatramin'izao dia tsy misy olona afaka namoaka teoria momba ny fomba nisehoany tao amin'ilay nosy. Ankoatra izany, ny lanjan'ny sarivongana iray dia mahatratra 25 taonina, saingy ny poti-bato lehibe indrindra dia mitentina eo amin'ny 90 taonina. Tsidiho amin'ny nosy maromaro ilay nosy, fa mariho fa ny tsirairay amin'izy ireo dia tsy mitsitsy vola. Ny fomba voalohany dia ny mamandrika fitsangatsanganana eo amin'ny fiaramanidina mpizahatany, izay miditra matetika ao amin'ny nosy. Ny fomba faharoa dia ny hividianana tapakila an'habakabaka mankany amin'ny nosy. Ny fifandraisana amin'ny rivotra dia avy amin'ny renivohitry ny firenena, ary ny fandaharam-potoanan'ny sidina dia miankina amin'ny vanin-taona. Ohatra, mandritra ny volana ririnina, dia tsy atao afa-tsy indray mandeha isan-kerinandro ny sidina. Ny ampitson'io fotoana izay ahafahanao manidina an'i Santiago indroa isan-kerinandro, ny ora fandehanana dia 5 ora.
Andean Kristy no mariky ny fiadanana. Maherin'ny zato taona lasa izay, teo amin'ny lava antsoina hoe Bermejo, izay miorina eo amin'ny sisintanin'i Arzantina sy Shily, dia nisy tsangambato iray nantsoina hoe Andean Christ. Ity fotoan-dehibe ity dia natao hanatsarana ny fiovàna eo amin'ny firenena roa tonta. Etsy andaniny, ny tsangambato majesty dia miorina amin'ny helo-maherin'ny 3,5 km ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Ny sarivongan'i Kristy dia narotsaka avy amin'ny varahina, izay vita taorian'ny fandefasana ny lava-bato fahiny nataon'ny mpanjanaka Espaniôla. Ho an'ny fanjakana tsirairay, io tsangambato io dia tandindon'ny fandriampahalemana, araka ny hita amin'ny soratra voasoratry ny tongotra, fa koa amin'ny fihaonana farany avy amin'ireo mpitarika roa avy amin'ny firenena ho an'ny zato taona amin'ny fananganana ny sarivongana. Tsy isalasalana, ny Andean Christ dia iray amin'ireo mari-pamantarana ara-javakanto indrindra ao amin'ny firenena.
Repoblikan'i Chile dia faly mandrakariva amin'ireo mpizaha tany sy mpizaha tany avy amin'ny firenena samihafa. Afaka mahita fialam-boly eto amin'ity tontolo ity ny fitsipiky ny taona sy ny foto-piainana rehetra. Ary tsy nisy olona diso fanantenana tamin'ny fitsidihany an'io firenena mamy sy mahagaga io.
Inona no ho entina avy any Shily?
Fialantsasatra any Chili
Fialantsasatra any Orogoay
Toeram-ponenana ao Chile
Zava-baovao mahaliana momba an'i Però
Fivarotana any Ekoatora
Fitaterana an'i Arzantina
VPN - inona moa izany, ahoana no fomba fananganana sy fampiasana ny serivisy?
Fitambarana ho an'ny vehivavy bevohoka
24 sangan'asa tsy manjary tsy mety amin'ny artista
Ahoana no mahasoa an'i Persimmon ary inona no manasitrana azy?
Fitafy ho an'ny vehivavy
Ny vaksininy ho an'ny bitro - zavatra manan-danja momba ny tsimokaretina
Ny taona vaovao dia mitafy ny zatovo
Fanamboarana takelaka amin'ny tanan'ny tanana
Proteinina sy proteinina dia tsara sy ratsy
Mivadika amin'ny serfa
Jama avy amin'ny paompy ho an'ny ririnina - tsotsotra tsotra ho an'ny takelaka mamy mamy indrindra
Fanasana amin'ny Halloween
Fandaminana ny trano fonenana
Boky tsara indrindra ho an'ny tanora
Inona no manampy an'i Dmitry Solunsky?
Ahoana no handraisana roatra any an-trano?
Volo volo ho an'ny volo grika
Entin'ny rivotra mahamay
Manty dough - recipe